wakiilka gaarka ah iyo Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo War murtiyeed ay ka soo saareen siyaasada dalka Soomaaliya | Wardoon Wardoon.net - Somali News
wakiilka gaarka ah iyo Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo War murtiyeed ay ka soo saareen siyaasada dalka Soomaaliya
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Yurub ugaga mas’uul ah dalka Soomaaliya Alexander Rondos iyo safiirka Midowga Yurub Micheele Cervone D’Urso arrimaha siyaasada dalka Soomaaliya ayaa waxa ay si wadajir ah u soo saareen warmurtiyeed ay ku cabirayaan aragtidooda ku aadan khilaafka ka dhexeeya mas’uuliyiinta ugu sareysa dalka.
“Baarlamaanka oo ah xubin muhiim ah qaab dhismeedka Federalka lehna mas’uuliyad gaar ah xilliyadan oo kale, waxaan ugu baaqeynaa xubnaha baarlamaanka in ay tixgeliyaan daacadna ka ahaadaan sida ay wax u socdaan, waana arrin aan annaga deeqbixiyayaasha mid aan si dhow u eegeyno.
Maanta Soomaaliya waxa ay u baahan tahay nabad iyo hogaan siyaasadeed oo macquul ah. Soomaaliya waxa ay haysataa 22 bilood oo kaliya inta ka dhiman sanadka 2016ka. Gobolada dalka waa inay samaystaan wakiilo maamulo kumeelgaar ah.”